Andrew Gazdecki na edemede Martech Zone |
Edemede site na Andrew Gazdecki
Andrew Gazdecki bụ onye nchoputa na onye isi nke Ngwa Bizness - na-eme ngwa ngwa mkpanaka dị ọnụ ma dịkwa mfe maka obere azụmaahịa. Anyị bụ iPhone, iPad, Android & HTML5 ngwa nyiwe na-eme ya nke na-enye ohere ka obere azụmaahịa ọ bụla mepụta, dezie ma jikwaa ngwa mkpanaka na-enweghị mmemme mmemme ọ bụla chọrọ.
Usoro mmalite maka mmalite na ụlọ ọrụ ọ bụla bụ ihe zuru ụwa ọnụ: gbagote nnukwu echiche, mee ụdị ngosi ya iji gosipụta, dọta ụfọdụ ndị na-etinye ego wee nweta uru ozugbo ịbatara ahịa na ngwaahịa agwụla. N'ezie, dịka ụlọ ọrụ si malite, otu a ka ngwa ọrụ dị. Ebumnuche nke ọgbọ ọ bụla iji kpughee ụzọ ọhụrụ iji bido ịmalite ọha mmadụ. Oge ndị gara aga na-adabere na ndị na-ere n'ụlọ n'ụlọ, na-ezipụ akwụkwọ ozi
Tọzdee, Nọvemba 10, 2016 Wenezde, August 30, 2017 Andrew Gazdecki
Ahịa bụ azụmahịa ndị mmadụ ebe mmekọrịta dị ka ngwaahịa a, ọkachasị na ụlọ ọrụ ngwanrọ sọftụwia. Ndị ọchụnta ego chọrọ onye ha ga-atụkwasị obi maka teknụzụ ha. Ha ga-akwado eziokwu a, ma lụọ ọgụ maka ọnụahịa ka mma, mana ọ dị omimi karịa nke ahụ. Onye na-ere ahịa ahịa na onye nwe SMB ga-emekọrịta ihe, ọ dịkwa mkpa maka ndị na-ere ahịa maka nke ahụ. Ọ bụghị ihe omimi maka a